ယခုခေတ် သာသနာပြုခြင်း	Posted on October 10, 2009	by mettayate တစ်ခါက မိဘမဲ့ကလေးများကို စောင့်ရှောက်မွေးမြူနေသော ဆရာတော်တစ်ပါးသည် အသိတစ်ယောက်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ထံ ရောက်လာပြီး အကူအညီတောင်းကြည့်သည်။
အတ္တဟိတသက်သက်လည်း အစွန်းရောက်အကျင့်ပင်ဖြစ်၏။ ပရဟိတသက်သက်လည်း အစွန်းရောက်အကျင့်ပင်ဖြစ်၏။ အတ္တဟိတလည်းပါမှ ပရဟိတလည်းပါမှ မဇ္ဈိမပဋိပဒါကျသော အကျင့်ဖြစ်လေ၏။ ထိုမှသာလျှင် ထေရ၀ါဒ အစစ်အမှန်ဖြစ်၏။
မြေပြင်မှာတည်ခြင်း မြေပြင်မှာ တည်သော ဘုရားများသည် သဘာဝရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာလျှင် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားရသည်သာဖြစ်၏။ တကယ့်အရေး တကယ့်ဘေးနှင့် ကြုံရသောအခါ မြေပြင်မှာ တည်ထားသော ဘုရားစေတီများသည် သာသနာမကွယ်ပျောက်အောင် တားဆီးကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိပေ။ ထိုအချက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပျောက်သွားသော နိုင်ငံများမှ ရုပ်ပွားစေတီများက သက်သေပြလျက်ရှိ၏။ မြန်မာနိုင်ငံ ကဲ့သို့ တစ်ချန်က ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့သော အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပေလေးရာပတ်လည်မျှကြီးမားသော ဗောဓောဗုဓု အမည်ရှိ ကျောက်စေတီတော်ကြီး ရှိနေသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မရှိတော့ပေ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဘာမီယန်မြို့တွင် ပေတစ်ရာကျော် မြင့်မားသော ကျောက်ဆင်းတုရုပ်ပွားတော်ကြီးများရှိသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကား မရှိတော့ပေ။
လူများ၏ နှလုံးသား၌တည်ခြင်း မိမိသန္တာန်တွင် သာသနာသုံးရပ်တည်ပြီးလျှင် သူတစ်ပါး သန္တာန်တွင် သာသနာသုံးရပ်တည်အောင် စာသင်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်၍ စာပေများကို ပို့ချသင်ကြားပေးခြင်း၊ ရိပ်သာများတည်ထောင်ပေး၍ တရားဓမ္မများ ဟောပြောပြသခြင်းများသည် သူတစ်ပါး သန္တာန်၌ သာသနာပြုခြင်းပင် ဖြစ်၏။
ဘာသာခြားလူငယ်တစ်ယောက်က ခုလို သူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သာသနာပြုနည်းသည် ဗျိုင်းနှင့်တူတယ်။ ဗျိုင်းဟာ ရေပေါ် ပေါ်လာတဲ့ငါးကိုသာ ဖမ်းစားပြီး ရေအောက်ထဲက ငါးကိုမဖမ်းဘူး။ ထို့အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းအများစုကလည်း မြို့ပေါ် ရွာပေါ်ကတွေ့သမျှ လူလောက်ကိုပဲ ဟောပြောပြပြီး သာသနာပြုတယ်။ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ တောရွာတွေထိလိုက်ပြီး သာသနာမပြုကြဘူး။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဘ၀တန်ဘိုးနှင့် အနှစ်သာရ